कति जान सकेका हुन् विदेश पनि ? « Pahilo News
कति जान सकेका हुन् विदेश पनि ?
प्रकाशित मिति : 12 July, 2017 10:44 am
२८ असार । कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरुबीच विदेश भ्रमणमा जानका निम्ति तछाडमछाड नै चल्न थालेको छ । सचिव डा. सुरोज पोखरेल विदेश गएर फर्किएको पर्सीपल्ट नै तीन जना सहसचिवहरु विदेश उड्न थालेपछि सो मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरुमा कसले बढी विदेश भ्रमण गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्न थालेको पाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य संगठनको रोममा सम्पन्न बैठकमा भाग लिएर सचिव डा. पोखरेल र सहसचिव योगेन्द्र कार्की सोमबार मात्रै नेपाल फर्किए । एक हप्ता लामो सम्मेलनमा भाग लिएर उनीहरु नेपाल फर्किएका हुन् । सामान्यतः उक्त सम्मेलनमा भाग लिन कृषि मन्त्री नै जाने गरिए पनि यस पटक सम्मेलन हुँदा कृषि मन्त्री नभएका कारण सचिव र सहसचिवले उक्त बैठकमा भाग लिने मौका पाएका हुन् ।
सचिव डा. पोखरेल रोमबाट फर्किएकै पर्सीपल्ट अर्थात् आज तीन जना सहसचिवहरु कोरियातिर उड्दैछन् । सहसचिवहरु लेखनाथ आचार्य, सुरेशबाबु तिवारी र ईश्वरप्रसाद रिजाल कोरिया जान लागेका हुन् । उनीहरु सम्मेलनमा भाग लिन जाने नाममा विदेश भ्रमण गर्न लागेका हुन् ।
त्यस्तै, गएको वर्षजस्तै यो वर्ष पनि धेरै पटक विदेश घुम्ने सौभाग्य भने मन्त्रालयमै असक्षम सहसचिव भनेर चिनिने लेखनाथ आचार्य रहेका छन् । आज कोरियातिर उड्न लागेका आचार्य केही दिनअघि मात्रै जेनेभाबाट फर्किएका हुन् । त्यसअघि उनी फिलिपिन्स घुम्न गएका थिए । आचार्यले त यो वर्ष धेरै विदेश घुम्ने सहसचिवको रुपमा आफूलाई उभ्याएका छन् । उनले यो वर्ष मात्रै ६ पटक विदेश घुम्ने मौका पाएको बताइन्छ । गएको वर्ष पनि उनले विदेश घुमेर रेकर्ड नै तोडेका थिए ।
यसैगरी, सोही मन्त्रालयअन्तर्गतको सबैभन्दा ठूलो आयोजना प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनाले आशातित काम गर्न नसकेपछि चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ । १ खर्ब ३० अर्बको दस वर्षे उक्त आयोजनाको आयोजना–प्रमुखका रुपमा अच्युतमप्रसाद ढकाल नियुक्त भएर आएपछि सो आयोजनाको कामले गति लिन नसकेको बताइन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ७८ करोड बजेट रहेको सो परियोजनाको काम सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ । पछिल्लो पटक १० वटा जोन र एउटा सुपर जोन थपेर आयोजनालाई विस्तार गरिए पनि अपेक्षाकृत रुपमा काम हुन नसकेपछि आयोजना–प्रमुख ढकालको असक्षमता प्रकट हुन पुगेको हो । आगामी वर्षका लागि साढे पाँच अर्ब बजेट छुट्याए पनि अहिलेकै गतिमा काम हुने हो भने अपेक्षा गरेअनुरुप सो आयोजनाले प्रगति गर्न नसक्ने बताइन्छ । सो आयोजनाको आयोजना प्रमुख ढकालको नेतृत्व क्षमतामाथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्न थालेपछि नयाँ मन्त्री नियुक्त भएपछि उनी फेरिने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।